Laporta oo si lama filaan ah uga hadlay xariga madaxweynihii hore Barcelona ee Josep Maria Bartomeu – Gool FM
(Barcelona) 01 Maarso 2021. Joan Laporta oo kamid ah musharixiinta ugu cad cad ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee kooxda Barcelona, ayaa ka hadlay xariga Madaxweynihii hore Josep Maria Bartomeu oo lagu eedeeyay isku day ah inuu sumcad daro ku sameeyo qaar ka mid ah kooxda iyo qoysaskooda.
Kiiskan ayaa la shaaciyay bishii Febraayo ee sanadka 2020, madaama la daabacay dukumiintiyo qarsoodi ah oo xaqiijinaya ku lug lahaanshaha maamulka Barcelona ee uu madaxda ka ahaa Bartomeu oo qandaraas la galay shirkad xayeysiis ah, kuwaas oo lagula heshiiyay inay sumcad dilaan qaar kamida shaqsiyaadka ka tirsan kooxda.
Haddaba Booliska Catalonia ayaa subaxnimadan Isniinta ah xoog ku galay xafiisyada Barcelona ee garoonka Camp Nou, si ay u raadiyaan cadeymo iyo dukumiinti cusub, kaddibna Josep Maria Bartomeu ayaa laga qabtay gurigiisa, iyadoo ay wehliyaan qaar ka mid ah xubno ka tirsanaa maamuulkiisii hore ee kooxda.
Inkasta oo cadaawad weyn ay ka dhaxeyso Joan Laporta iyo Bartomeu, haddana wuxuu muujiyay inuusan ku faraxsneyn warka xaqiijinaya xariga madaxweynihii hore ee Barcelona, maadaama uu u arko in arintan ay tahay mid hoos u dhigeysa sumcadda kooxda.
Joan Laporta oo ka hadlayay xariga Madaxweynihii hore kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu, ayaa wuxuu yiri:
“Ma ahan war wanaagsan, mana ahan war u wanaagsan Barcelona, sababtoo ah qofkani wuxuu ahaa madaxweynaha Barcelona.”
“In kasta oo uusan lahayn maamul wanaagsan, hadana waa madaxweynaha Barcelona, ​​warkana uma fiicna cidna, runta ayaa ah inay xaqiiqdii tahay war naxdin leh.”